.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: iPhone Locker for Android
ဒီနေ့တော့ Android ဖုန်းသုံးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် iPhone Locker ဆိုတဲ့ App လေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ဖုန်းကို လော့ချထားလိုက်ရင် ဒီ App လေးက iPhone Lock ဒီဇိုင်းလေး ပေါ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်း App ထဲမှာ
Screen Lock Wallpaper တွေ ပါရှိသလို မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့လည်း Wallpaper အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ဖုန်းကို သူများမသုံးစေချင်ရင် Security Locker ကို Password နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
အောက်မှာ နောက်ထပ် လုပ်လို့ရတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ...
Download: iPhone Locker for Android
ကျွန်တော် အသုံးပြုထားတဲ့ ပုံလေးလိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ်။ မွန်မလေး တစ်ယောက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီ ပို့စ်ကိုပြန်ရှယ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့် Blog ကို Credit ပြန်ပေးပါရန်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပါ။
Posted by Thurainlin at 04:31